जागिर चाहियो ? सफल जबमा सम्पर्क गर्नुस् – Janacharcha.com
» समाचार अंक: 1249
जागिर चाहियो ? सफल जबमा सम्पर्क गर्नुस्
Janacharcha.com शुक्रबार, आश्विन १७, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, आसोज १७
देशमा बेरोजगारी छ, बेरोजगारी अन्त्यका लागी सरकारी तबरबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन भईरहेको छ । सरकारसँगसँगै निजि क्षेत्रपनि राष्ट्रको बेरोजगारी अन्त्य गर्नतर्फ लागि परेका छन् । जसको ज्वलन्त उदारण बनेको छ विराटनगरको सफल जब सेन्टर ।
सफल जब संचालनमा आएको करीब एक वर्ष भएको छ । यो अवधिमा यस सेन्टरले विराटनगर र आसपासमा क्षेत्रमा रहेका ५ सयभन्दा बढी बेरोजारहरुलाई रोजगारी प्रधान गरिसकेको छ ।
सफल जबले विभिन्न उद्योग, फर्म, पसल र विभिन्न सेन्टरमा आवश्यक कार्मचारीको सुचना संकलन गर्ने गर्दछ । अर्को तर्फ जागिर खोज्दै आउनेलाई आफुले गर्न चाहेको कामबारे फारम भर्न लगाउने गरेको छ । यदी मागकर्ताको आवश्यकता अनुसार कसैको आवेदन मेल खाए, रोेजगारदाता र जागिर खाने चाहने बिच मेलामिलाप गराउने काम सफल जबले गर्दै आएको छ । सफल जबले हालसम्म विभिन्न उद्योग तथा कार्यलयमा मजदुर, कार्यलय सहयोगी, रिसेप्सन, लेखापाल देखि व्यावस्थापकसम्मको पदमा जागिर दिईसकेको बताउँछ ।
सफल जबका अध्यक्ष सन्दिप निरौला भन्छन् “हामीले रोजगारदाता र रोजगारकर्ता बिच पुलको काम गरिरहेका छौं, यो पुलले एक वर्षको अन्तरालमा ५ सयभन्दा बढी बेरोजगारलाई रोजगारदातासम्मको गन्त्व्यमा पु-याईसकेको छ, अहिले पनि थुप्रै मानिसहरुले दिएको आवेदनको थक्की हामी कहाँ छ, हामी सकेसम्म रोजगार दातासँग मेल गराउने प्रयासमा छौं”
हाल सफल जबले विराटनगरको भृकुटी चौकमा आफ्नो कार्यलय संचालन गरीरहेको छ । उक्त कार्यलयमा दैनिक दर्जन भन्दा बढी मान्छेहरु जागिरको खोजी गर्दै आउने गरको सफल जबका आर्का संचालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लोकनाथ अधिकारीको भनाई छ । उनीहरुसँग आफुले गर्न चाहेको कामबारे फर्म भर्न लगाउने र कसैले त्यसअनुसारको कामदार माग गरे उनीहरुलाई फोन सम्पर्क गरी रोजगारदातासँग भेट गराउने गरेको अधिकारी बताउँछन् ।
संचालकमध्येकै अर्का सरोज रेग्मी रोजगार माग्ने आउने धेरैमा शिपको कमी देखिएको बताउछन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै निकट भविष्यमा सफल जबले ट्रेनिङ सेन्टर समेत संचालनमा ल्याउने योजना बनाएको रेग्मी बताउछन् ।
कर्मचारीको आवश्यताबारे सफल जबले आफ्नो अधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत समेत जानकारी गराउने गरेको छ । यदी कसैलाई जागिरको आवश्यकता भए कुनै पनि हिचकाहट बिना सफल जबको कार्यलयमा सम्पर्क गर्न संचालकहरुको आग्रह छ ।